नेपाल आज | EXCLUSIVE: न्यायाधिशहरुको रासलिला, मदिरापान र सेटिङको खुलासा (भिडियोसहित)
EXCLUSIVE: न्यायाधिशहरुको रासलिला, मदिरापान र सेटिङको खुलासा (भिडियोसहित)
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्दैशम्शेर जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको राजीनामा/बहिर्गमनको माग तीव्र भइरहेको छ ।
पछिल्लो चरणमा प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिक रूपमा झनै च्युत भएको भन्दै एकथरीले राजिनामा मागिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ समस्या चोलेन्द्र नभएर पद्धति र न्यायिक प्रणाली भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भनिरहेका छन् । उनीहरुले अहिले न्यायाधिशहरुले सुरु गरेको हड्ताल, इजलास वहिस्कार लगायतका कार्यक्रम गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पनि माग गरिरहेका छन् ।
समग्रमा न्यायिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति एवं निकायहरु न्यायालयको निष्पक्षताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल आजले शुक्रवार नेपाल वार एसोसिएसनको सभाकक्षमा ‘सवाल जवाफ’ कार्यक्रमको अयोजना गरी सरोकारवालाहरुको धारणा वुझने जमर्को गरेको छ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागिहरुले पनि दुवै खाले धारणा राखेका छन्। तर, न्याय क्षेत्रलाई नै अस्तब्यस्त वनाउने गरी सुरु गरिएका पछिल्ला गतिविधि गलत भएको अधिकांशले वताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तिर्थ वस्यौलाले न्यायालयममा पद्धती र चलनमै समस्या देखिएकाले प्रधानन्यायाधिश जबराको राजिनामा नै समस्याको समाधान भएको वताए । नेपाल वार एसोशिएसनले उनको राजिनामा मागेकाले निर्णय कार्यान्वयन भए आफुलाई मान्य हुने वताउँदै उनले तर, यो नै समस्याको समाधान भएको वताए । ‘म टालटुले काममा विश्वास गर्दिन। न्यायालयमा तत्काल जे भयो, टुंगियो भन्ने छ। नेपालको अहिलेसम्म भएका आन्दोलन टुङ्गोमा नपुगिकन विचैमा रहेका कारण यो अवस्था आएको हो। हामी साक्षी छौं, आजभन्दा पहिला धेरै पटकसम्म भ्रष्टाचार गरेको। कुनै न्यायाधिशको वारेमा सवाल उठ्यो भने उसलाई वोलाएर राजिनामा दे भन्ने चलन थियो। हालसम्म कारवाही गर्ने चलन छैन, मलाई चै थाहा छैन। वोलाउने, राजिनामा गराउने अनि सिद्धियो। किन भने उसको पेन्सन पनि थामियो, कारवाही पनि भएन। राजिनामै दिईसक्यो भन्यो, छोड्दियो। उसका सवै कमी कमजोरी माफ’ उनले भने–‘विकिृतीहरु कसरी आएका छन् भन्ने उदाहरण दिन खोजेको हुँ।’
उनले अगाडि थपे–‘एक जना प्रधानन्याधिशको जागिर वहाँकै सचिवालयको सचिवले खाईदियो। त्यो वेला वार र हामी कसैले केही पनि गरेनौं । एक जना न्यायाधिश, प्रधानन्यायाधिश हुन नपाउनु भएपछि अदालत आईरहनु भयो। तर, वहाँलाई विजनेश नदिएर (वेन्च नतोकिदिएर), वस्ने ठाउँपानि नदिएर वहाँलाई निस्कन वाध्य पारियो। त्यै वेलामा आवाज उठाएर यो त गलत हो, असंवैधानीक हो, गैरकानुनी हो, भनेर त्यहि दिन भएको थियो भने आजको दिन आउँदैनथ्यो भन्ने मेरो सामान्य निचोड छ।’
‘हाम्रोमा कानुन अरुले पालना गर्दिनु पर्ने, पैसा आफुले कमाउनु पर्ने, आफुलाई चाहियो भने चाहिएको अनुसार कानुन वनाउने । दलसम्वन्धी ऐन आदि/इत्यादी सवै हेर्नुसन। वाधा अड्चन हटाउने हैन की आफनो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने जे पनि गर्न तयार। मेरिट र कम्पीटेन्सीको कहिलै कदर भएन। आफना मान्छे, हाम्रो मान्छे । राम्रो त कहिलै खोजेनौ। मलाई एटा उदाहरण वताई दिनोस– कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता वा पहुचवाला वा घरानीया मान्छे प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने उसलाई छुटाउन फोन नगएको होस, कार्यकर्ताले पुलिस थाना घेराउ गर्न नगएको होस। किनकी आफनो मान्छे। यो सस्पेक्ट हो, तिमी गर, तर कारवाही हुनपर्छ । अनुशन्धान गर भनेर कहिलै छोडेको छैन। घेराउ गरेको छ, प्रेसर हाल्या छ’ उनले थपे–‘त्यो आफनो मान्छे हो त्यसैले छुटाउनु पर्छ । यस्तै प्रवृत्तिहरुले त्यो भएको हुनाले हाम्रो प्रधानन्यायाधिशले राजिनामा दिदैमा समस्या समाधान हुन्छ ? आई डन्ट नो।’
उनले आफुलाई त प्रधानन्यायाधिश दिए पनि आफुले स्विकार नगर्ने वताए । ‘मलाई प्रधानन्यायाधिश वनाई दियो भने म चै जिम्मा लिन्न। किन भने यति साह्रो विकृत भएर, यति सािह्रो चै गएर। किन भने यो दिन फेरी आउँछ क्या। अहिले तत्काललाई सिजेले मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेर हाम्रो वारले भन्या हुनाले प्रसस्त गर्दिनोस त्यो निर्णय म मान्छु। मान्नु पर्छ मैले’ उनी भन्छन्–‘राजिनामा दिएर सवै सल्टिन्छ भने हुन्छ क्या। तर, यो दिन फेरी फेरी आउँछ क्या, फेरी फेरी आउँछ। यो चै आईरहिने मैले देखेको हुनाले म चै नेतृत्व लिन चाहान्छ। किन भने हाम्रा प्रधानन्यायाधिशहरु वेला–वेलामा विवादमा परेका छन। त्यो कारण के भन्दा प्रधानन्यायाधिशले म चै मोरदेन जज भन्ने कुरा कहिलै पनि सम्झेनन्। उसले ब्यवस्थापन जान्नु पर्छ, नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। वसेर फैसला गर्नलाई त अरु पनि न्यायाधिश छन। मोरदेन जज भन्ने कुरा चै वहाले नगरेका कारणले। र अव अहिले पहिला जस्तै छैन, हेर्नुस। राज्यमा विस्वास गर्ने र अन्तिम धरोहरर भरोसा गर्ने नियकाय यस्तो भईसकेपछि मान्छेले मन कहाँ राख्छ, कहाँ थामिन्छ ? त्यसैले तत्कालका लागि एउटा उपाय केहि हुन सक्छ। वहाँले राजिनामा दिएर केहि समय सल्टिन सक्छ। पर्मानेन्टली यसलाई यो गराउनलाई चै विधि र पद्धती मान्ने प्रचलन चै वस्न जरुरी छ। कानुनको शासन हुन जरुरी छ।’
यसैगरी मानव अधिकारवादी तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता कृष्ण प्रसाईले पनि न्याय प्रणालीमा देखिएको मनपरीले अहिलेको समस्या आएको वताए । एमसीसी प्रकरणमा फातिमा सुमारलाई विरोध पत्र वुझाउन खोज्दा ७ दिन प्रहरी हिरासतमा वस्नु परेको प्रसंगवाट आफुनो कुरा सुरु गरेका उनले अन्तिम दुई दिन ‘गंगामायाँ’ नामको खण्डकाब्य लेखेको वताए ।
गंगामाया वर्षौदेखि अनसनरत छिन् उनको अवस्था नदेख्ने न्यायालय रञ्जन कोईरालाको विषयमा चित्तले देखेर सजाय चर्को यभो भनेर फैसला गर्छ भन्दै ब्यंग्य गरे। ‘अदालतले वन्दिको चित्त देख्दैन। रञ्चन कोईराको मात्रै देख्ने कस्तो हो चित्त ?’– उनले प्रश्न गरे ।
उनले अन्तराष्ट्रिय प्राकिटसका कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधिशको समर्थन गर्ने वताए । ‘महाअभियोग लाग्छ, राजिनमा दिनुपर्छ। दिनाकरणको सिक्किममा हुर्नुहोस। २००४ मा कलकत्ताको मुख्य न्यायाधिश थिईन सुमित्रा सेन भन्ने । उनले राजिनामा दिईनन्, महाअभियोग लाग्यो नी त’ उनले भने–‘हामीसँग अन्तराष्ट्रिय कानुन मुल्य र मान्यता छन् । हाम्रो ट्याक्सवाट तलव भत्ता खाएर सुविधा लिएर वन्दि प्रतक्षिकरणको मुद्दा पनि हेर्दिन भन्न मिल्छ ? अप्रेसन गरिराखेको डाक्छटरले आधि चिरेर मलाई पैसा थप भए मात्र सिलाउँछु भन्न मिल्छ ?’
प्रधानन्यायाधिश प्रकरणमा नेपालका सांसदहरुको योग्यता माथि पनि उनले प्रश्न उठाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर ‘तुम्हारा देश स्वतन्त्र है’ भन्दा तालि वजाउने सांसद हामीलाई चाहिन्छ ? हरेक कुरामा योग्यताको कुरा गर्ने सांसदको योग्यताको कुरा उठाउने की नउठाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदीले न्यायाधिशहरुको आचरण माथि नै प्रश्न उठाईन। इटहरीका मेयर द्वारीका चौधरीले न्यायाधिशहरु कोठीमा जान्छन भनेको सुनेपछि आफनो टिमले इटहरी, भेडेटार आसपासका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको र केही रेकर्डहरु पनि जम्मा पारेर ल्याएको वताएकी उनले आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिईन। ‘हामीले त्यहाँवाट रेकर्ड पनि ल्याएका छौ, सार्वजनिक गर्न नपरोस’ चेतावनीको भाषमा उनले भनिन्–‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशको हविगत सार्वजनिक गर्न नपरोस। न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको केस। वहाँको श्रीमती ललिताले पनि हामीलाई केही सुचना र रेडर्क दिनु भएको छ। अर्को न्यायाधिश मिरा खड्काका दुई वटा जन्ममिति छन्। उहाँको नागरिक्ता दुईटा होकी दुई पटक जन्मनु भो ?’
यसैगरी, सुवास ढकाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको स्ट्रिङ अप्रेसनवाट पीडित भएका डिवी कार्कीसहित करिव डेढ दर्जन सहभागि÷सरोकारवालाले आफनो धारणा राख्नु भएको छ। वहाँहरुको धारणाहरु हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।
सर्वोच्च अदालत खुलासा चोलेन्दैशम्शेर जबरा